सुदिप घिमिरेको अनुभब : मान्छेको भबिष्य पारिबारीक पृष्ठभुमि र संगतमा भर पर्छ । | www.itaharifm.com.np
गृहपृष्ठ » सम्वृद्धि यात्रा » सुदिप घिमिरेको अनुभब : मान्छेको भबिष्य पारिबारीक पृष्ठभुमि र संगतमा भर पर्छ ।
Posted by Itahari Fm | error | १९९६ पटक
अर्थ सम्बादमा आजको अतिथी हुनुहुन्छ युवा उधमी सुदिप घिमिरे । सुदिप सामान्य परिबारमा जन्मे हुर्केर ब्यबसायीक क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्न सफल ब्यबसायी शिब घिमिरेका छोरा हुनुहुन्छ । बुवा शिब घिमिरेले सुरुवात गरेको घिमिरे ग्रुप अन्तर्रगत बिभिन्न ठाउमा खोलीएका पेट्रोल पम्प र ग्यास उद्योगमा अहीले एक हजार भन्दा बढिले रोजगारी पाएका छन् । एक हजार भन्दा बढीलाइ स्वदेशमै रोजगारी दिने यी उद्योगको नेतृत्व गरि रहेका सुदिप अहीले उद्योग बाणीज्य संघ इटहरीको भबन निमार्ण समितिको संयोजक पनि छन । कम उमेरमै ब्यबसायीक नेतृत्व लिन सफल २९ बर्षीय उद्यमी सुदिप घिमिरेसंग हामीले नेपालको पेट्रोलियम ब्यबसाय र रोजगारीको सन्दर्भमा कुराकानी गरेका छौ ।
तपाइको ब्यबसायीक पृष्ठभुमि बताइ दिनुस न ।
हाम्रो घिमिरे ग्रुप द्वारा संचालित पेट्रोलियम ब्यासाय बिगत २५ वर्ष देखि संचालनमा छ । पेट्रोलियम ब्यबसाय अन्र्तगत नै हामीले २०६२ सालदेखि ग्यास उद्योग पनि सन्चालन गरि राखेका छौ । पहिलो पटक ६२ सालमा धादिङ्गमा सुगम ग्यास उद्योगको सुरुवात गरेका थियौ । त्यस पछि क्रमस इटहरीमा प्रिमा, झुम्कामा कामख्या, हेटौडमा शाहारा र काठमण्डौमा एभरेस्ट गरि १३ बर्षको अबधीमा देशका विभिन्न भागहरुमा जम्मा ५ वटा ग्यास उद्योग पनि संचालन गरिरहेकाछौ । मेरो बुबा शिब घिमिरेले शुरुवात गर्नुभएको पेट्रोलियम ब्यबसायलाई हामीले उचाइ दिने काम गरिरहेका छौ ।
ब्यबसाय गर्नुको एउटा उदेष्य नाफा कमाउनु हो । तर नाफासंग संगै सामाजिक दायीत्व पनि हुन्छ । तपाइले चै नाफा कमाउने अर्थात तपाइको भाषामा ब्यबसायलाइ उचाइ दिनेक्रममा भोगेका अनुभब र सामाजिक भुमिका पनि बताइ दिनुस ।
एलपी ग्यास विश्वकै क्लिन फ्युल हो जुन वस्तु नेपालमा मात्र हैन बरु विश्वमै सटेज हुने वस्तु हो । दुखको कुरा हाम्रो नेपालमा आफ्नै उत्पादन छैन । हामीले भारतबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसकारण बेला बेला आभाव हुनु स्वभाविकै हो । नेपालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेलाको ब्यबस्थापन निकै चुनौतीपुर्ण रह्यो । यद्यपि त्यतिवेलाको आभावलाई समाधान गर्न १४.२ को ग्यास लाइ ७.१ अर्थातन आधा सिलिन्डर रिफिल गरेर पनि ग्राहकहरुलाई उपलब्ध गरायौ र यसरी रिफिल गर्दा १४.२ कै कस्ट, जनसक्ति, समय, यातायात आदि कारणले हामी त उल्टै घाटामा गयौ । तर हामीले सामाजीक दायीत्व ठानेरनै उपभोक्तालाइ दिनुपर्ने सुबिधा आफुले घाटा खाएर पनि उपलब्ध गराएका हौ ।
धेरै ठाँउमा ग्यासका सिलीण्डर पड्केर उपभोक्ताको ज्यान पनि गएको छ । सुरक्षाकालागि चाही तपाइहरु के गर्दै हुनुहुन्छ ?
ग्यासको सिलिण्डर त्यति सजिलै बिस्फोट हुने चिज होइन । तर ग्यासको प्रयोग सही ढंगले हुन नसक्दा कतिपय अबस्थामा यस्ता दुखद घटना पनि भएका छन् । हामीले हरेक कुरामा साबधानी अपनाइ रहदा पनि यो अबस्था आउदा हामी दुखी पनि छौ । उत्पादक र बितरकले मात्र साबधानी अपनाएर मात्रै पनि हुदैन । उपभोक्ताले पनि सही ढंगले प्रयोग र साबधानी अपनाउनु पर्छ । सकेसम्म ग्यास किचन बहिर राख्नुनै बुद्धिमानी हुन्छ । ग्यास भरिएको सिलिण्डरलाइ लात्ताले हान्दै गुडाउने, दुईताला बाट फालेर झार्ने गरेको पनि सुन्नमा आउछ । यस्तो गर्नु हुदैन ।
तपाइको कम्पनीमा कति जनसक्ति खपत भाछ अर्थात कति जनालाई रोजगार दिनुभएको छ ?
हाम्रो घिमिरे ग्रुप अन्तर्गत करिब एक हजारलाई रोजगार दिएकाछौ । बैंक बाट लोन लिएर ब्याज तिर्ने गर्छौ जसले गर्दा बैंक पनि चलायमान छन् । राज्यलाई ट्याक्स तिरेकाछौ यस्ले देशको बिकासमा केही न केही टेवा पुगेको छ । समाजीक काममा पनि योगदान भैरहेको छ भन्ने लाग्छ ।
तपाईको उमेरका धेरै युवा के गरौ कसो गरौ भनेर चिन्तामा अल्मलिएको, कतिपय मनोरन्जनमा समय खर्चेको पनि देखिन्छ । तपाइको बुझाइ चाही कस्तो छ ?
धेरै जसो भविष्य निर्धारण पारिवारीक पृष्टभूमिले र संगतले पनि गर्दो रहेछ । मेरो परिवार नै व्यवासायीक भएकाले मैले व्यवसाय गर्ने तरिका परिवार बाटै सिके र प्लास २ गरे लगतै १८ बर्षको उमेर देखिनै व्यवासायमा लागेको हु । अरुको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दा धेरै बिश्लेषण गर्नु पर्दछ । गरिबी र अभावको अवस्था कसरी हुनगयो त्यो कुराचाहि महत्वपूर्ण हो । यदि गलत काम गरेर दिनभरि हिड्ने, आफुसंग भएको सिपको प्रयोग नगर्ने, जे आफुसंग छैन त्यही खोजेर बस्ने हो भने त्यस्तो मान्छेलाई अभाव त हुनेनै भयो ।
जाँदा जाँदै तपाइको युवा साथहिरुलाइ केही सन्देश छ की ?
पहिलो कुरा त युवाहरुले समयलाई खेर फ्याक्नु भएन । बरालिनु भएन । आफुसंग जे छ त्यसको सदुपयोग गरि हाल्ने गर्नु पर्छ । र एलपी ग्यास उपभोक्ताहरुलाइ चाही म साबधानी पुर्बक ग्यासको प्रयोग गर्न अनुरोध गर्छु । हामी पनि जिम्मेवारी पुर्बक काम गर्छौ । हाम्रो तर्फबाट गर्नु पर्ने सबै हामीनै गर्छौ । तपाइहरु पनि साबधानी पुर्बक प्रयोग गर्नुहोस । सकारात्मक सोचका साथ सबैले आ आफ्नो ठाँउबाट केही न केही गरौ ।
असार ७ गते बिहीबार बिहान इटहरी एफ.एमबाट प्रसारीत कार्यक्रम अर्थसंबादको संपादीत अंश ।